चिलिमे हाइड्रोपावरको वार्षिक साधारणसभा हुने स्थान परिवर्तन, कहिले हुँदैछ एजीएम ?
काठमाण्डौ । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २५ औँ वार्षिक साधारणसभा हुने स्थान परिवर्तन गरेको छ। कम्पनीले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्नो वार्षिक साधारणसभा अब काठमाण्डौको धुम्बाराहीस्थित स्काई जोन रेस्ट्रो एन्ड बैंक्वेटमा हुने जानकारी गराएको छ। यसअघि कम्पनी वार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौको महाराजगन्जस्थित कम्पनीको...
सूर्या लाइफको एजीएम आज, कति गर्दैछ लाभांश पारित ?
काठमाण्डौ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आज पुस १९ गते आफ्नो १३ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। वार्षिक साधारणसभा विराटनगरस्थित होटेल हैरिसन प्यालेसमा हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तावित कुल १३.३६८४ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा १२.७ प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयर र ०.६६८४ प्रतिशतले हुन आउने नगद...
प्रभु बैंक र साना किसान विकास लघुवित्तको एजीएम आज, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । लाभांश पारित मुख्य अजेन्डासहित प्रभु बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज पुस १८ गते आआफ्नो वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्दैछन्। प्रभु बैंकको २० औँ वार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौको बबरमहलस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि...
वोमी र सूर्योदय लघुवित्तको एजीएम आज, मर्जर स्वीकृति र लाभांश पारित मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ। वोमी लघुवित्त र सूर्योदय वित्तीय संस्थाले आज आआफ्नो वार्षिक साधारणसभा डोकेका छन्। वोमी लघुवित्तको दसौँ वार्षिक साधारणसभा काभ्रे धुलिखेलस्थित होटेल अरनिको सभाहलमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ। सभामा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ। यसैगरी सूर्योदय...
सनराइज बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट लाभांश पारित, चुक्तापुँजी रु. १०.११ अर्ब पुग्यो
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्नै सनराइज बैंक लिमिटेडको १४ औँ वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको सभापतित्वमा सम्पन्न सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बैंककोे चुक्तापुँजीको ६.६५% का दरले हुन आउने रकम रु.६३ करोड ९ लाख ४८ हजार ३०९.२१ रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण...
नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्वारा एजीएम आह्वान, बम्पर लाभांश पाउन कहिलेसम्म बन्नुपर्छ सेयरधनी ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बम्पर लाभांश अनुमोदन गर्न नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो आठौँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो माघ ६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा धादिङको धादिङबेसीस्थित क्रिक रिसोर्टमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत...
जोशी हाइड्रोपावरले डाक्यो एकैपटक ३ आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले एकैपटक तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को क्रमशः पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको हो। सभा काठमाण्डौको दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क हलमा बिहान ११ः३० बजेबाट...
मल्टीपर्पस फाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा पुस ३० मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । मल्टीपर्पस फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २४ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको पुस ८ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा सप्तरीको राजविराजस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो २९ औँ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको पुस ९ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट सुरु हुनेछ। सभाले स्वाप रेसियो १ः१ सेयर अनुपातमा हुने गरी...
लुम्बिनी विकास बैंकको एजीएमबाट १३% बोनस सेयर पारित
काठमाण्डौ । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले आज सम्पन्न १४ औँ वार्षिक साधारणसभा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश पारित गरेको छ। सभाले ०.६८२४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजन) र १३ प्रतिशत बोनस सेयरसहित कुल १३.६८४२ प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का...
स्वाभिमान लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभाबाट ३४% लाभांश पारित
काठमाण्डौ। स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाबाट गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ। रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार अनलाइन माध्यमबाट भएको संस्थाको वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको कुल ३४ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले हटायो एजीएमको अजेन्डाबाट १००% हकप्रद जारीको प्रस्ताव
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो २० औँ वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्तावका रुपमा राख्ने भनेको फेरि १०० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको अजेन्डा हटाएको छ। बैंकले आज वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी संशोधित सूचना जारी गर्दै १०० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको अजेन्डा हटाएको छ। गत बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा र...
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले डाक्यो एजीएम, २५% बोनस सेयर पारित गर्ने
काठमाण्डौ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो ११ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा रुपन्देहीको बुटवलस्थित होटेल न्यु इरामा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
कालिका पावरको लाभांश घोषणा, वार्षिक साधारणसभा पनि आह्वान
काठमाण्डौ । कालिका पावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ६० करोड रुपैयाँको कुल १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो। घोषित लाभांशमा १५ प्रतिशतले हुन आउने ९ करोड रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.७८९५...
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको ४२% लाभांश पाउन कहिलेसम्म बन्नुपर्छ सेयरधनी ?, एजीएम आह्वान
काठमाण्डौ । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो नवौँ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा सुनसरीको दुहवीस्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक...